N'iji belata mmetụta nke ọrịa nje korona n'ahụ ụmụ mmadụ, Ọkammụta Sam Ụzọchukwu ekesàála ego ruru otu narị puku naịra na iri ise nyegara ụmụnwaanyị Ụmụnwunne dị n'Ebenator, n'okpuru ọchịchị ime obodo Nnewi South nke steeti Anambra.
Ihu ọchị wàrà ụmụakwụkwọ mahadum Nnamdị Azikiwe dị n'Awka na nso nso a dịka òtù ọrụ obi ebere a maara dịka 'Chinedu Umeadi Foundation' kesààrà ha ihe erimeri sị iche iche, iji bèlatara ha agụụ. Ihe erimeri ahụ e kesààrà ndị ahụ gụnyere mba ji ruru narị anọ n'ọnụọgụgụ, igbe erimeri noduul karịrị narị anọ, mkpọ mmanụ nkwọchasị aka bụ 'hand sanitizer' ruru narị anọ, na àkpà nnu ruru iri, tinyere ihe ndị ọzọ.
N'imezupụta nkwa ahụ o kwere, gọọmenti steeti Anambra amalitela ikesara akpa osikapa, nyegara ndị okenye nọ n'agbata ajọ iri isii gbagobezie n'obodo niile dị na steeti ahụ.
COVID-19: Ọkaokwu Ụlọ Omebe Iwu Anambra Ekèéla Ndị Ayamelụm Osikapa